箴言 19 CCB – Mmɛbusɛm 19 ASCB | Biblica
箴言 19 CCB – Mmɛbusɛm 19 ASCB
1Ohiani a ne nanteɛ ho nni asɛm no
yɛ sene ɔkwasea a nʼasɛm mfa ɛkwan mu.
2Mmɔdemmɔ a nimdeɛ nka ho no nyɛ,
saa ara na ntɛmpɛ a ɛma obi yera ɛkwan nso nyɛ.
3Onipa agyimisɛm sɛe nʼabrabɔ,
nanso nʼakoma huru tia Awurade.
4Ahonya frɛfrɛ nnamfonom bebree;
nanso ohiani adamfo gya no hɔ.
5Adansekurumni bɛnya nʼakatua,
na deɛ ɔtwa nkontompo remfa ne ho nni.
6Nnipa pii pɛ adom firi sodifoɔ nkyɛn,
na deɛ ɔkyɛ adeɛ yɛ obiara adamfo.
7Ohiani abusuafoɔ nyinaa po no,
na saa ara na ne nnamfonom po no!
Mpo ɔhwehwɛ wɔn pɛ sɛ ɔpa wɔn kyɛw,
nanso ɔnhunu wɔn baabiara.
8Deɛ ɔnya nyansa no dɔ ne kra;
deɛ ɔpɛ nhunumu no nya nkɔsoɔ.
9Adansekurumni bɛnya asotwe,
na deɛ ɔtwa nkontompo no bɛyera.
10Akɛsesɛm mfata ɔkwasea,
anaasɛ akoa bɛdi mmapɔmma so!
11Onipa nyansa ma no ntoboaseɛ;
sɛ ɔbu nʼani gu mfomsoɔ bi so a ɛhyɛ no animuonyam.
12Ɔhene abufuo te sɛ gyata mmobom,
na nʼadom te sɛ ɛserɛ so bosuo.
13Ɔba kwasea yɛ nʼagya ɔsɛeɛ,
ɔyere ntɔkwapɛfoɔ te sɛ nsusosɔ a ɛntwa da.
14Afie ne ahonyadeɛ yɛ agyapadeɛ a ɛfiri awofoɔ,
na ɔyere nimdefoɔ firi Awurade.
15Akwadworɔ de nnahɔɔ ba,
na ɛkɔm de ɔkwadwofoɔ.
16Deɛ ɔdi nkyerɛkyerɛ so no bɔ ne nkwa ho ban,
na deɛ ɔgyaagyaa ne ho no bɛwu.
17Deɛ ɔyɛ adɔeɛ ma ohiani no yɛ de fɛm Awurade,
na ɔbɛtua no deɛ ɔyɛ no so ka.
18Tene wo ba, na ɛno mu na anidasoɔ wɔ,
na ɛnyɛ wɔn a wɔde no kɔ owuo mu no mu baako.
19Ɛsɛ sɛ onipa a nʼakoma ha no no tua so ka;
sɛ woka ma no a wobɛyɛ bio.
20Tie afotuo na gye nkyerɛkyerɛ to mu,
na awieeɛ no, wobɛhunu nyansa.
21Nhyehyɛeɛ bebree wɔ onipa akoma mu,
nanso deɛ Awurade pɛ no na ɛba mu.
22Deɛ onipa pɛ ne nokorɛ dɔ;
ɛyɛ sɛ wobɛyɛ ohiani sene sɛ wobɛyɛ ɔtorofoɔ.
23Awurade suro kɔ nkwa mu;
na onipa de abotɔyam home a ɔhaw bi nni mu.
24Ɔkwadwofoɔ nsa ka ayowaa mu
na ɔremma so mpo nkɔ nʼano!
25Twa ɔfɛdifoɔ mmaa, na atetekwaa bɛfa adwene;
ka deɛ ɔwɔ nhunumu anim, na ɔbɛnya nimdeɛ.
26Deɛ ɔbɔ nʼagya korɔno na ɔpamo ne maame no
yɛ ɔba a ɔde aniwuo ne animguaseɛ ba.
27Me ba, sɛ wogyae nkyerɛkyerɛ tie a,
wobɛmane afiri nimdeɛ nsɛm ho.
28Adansekurumni di atɛntenenee ho fɛw;
na omumuyɛfoɔ ano mene bɔne.
29Wɔasiesie asotwe ama fɛdifoɔ,
ne mmaabɔ ama nkwaseafoɔ akyi.
ASCB : Mmɛbusɛm 19